Ny Finday Raitra Voalohany Vita Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Ny Finday Raitra Voalohany Vita Afrikana
Voadika ny 24 Avrily 2015 9:19 GMT
Orinasan'ny CZ Electronics, nahazoan-dalana. Les usines de CZ Electronics avec permission
Namorona ny marika voalohan'ny finday raitra sy tablety vita ao Afrika Atsimo ny orinasa Afrikanina Tatsimo CZ Electronics. Mikendry ny tsena Afrikanina no tena tanjony. Miainga amin'ny zavamisy amin'ny fanafaran'i Afrika Atsimo finday 20 tapitrisa isan-taona kanefa 18% n'ny Afrikana Tatsimo monja no manana finday avo lenta, nanapa-kevitra hamorona finday raitra mitovy toetra sy fomba fiasa saingy takatry ny fahefa-pividin'ny ankamaroan'ny mponina ny CZ Electronics.
Mbola lavitry ny fanantenan'ny ankamaroan'ny Afrikanina ny fananana finday raitra hatreto, saingy namaha izany olana izany ny orinasan'i Limpopo. Raha ny marina, namorona ireo finday raitra sy tablety voalohany vita Afrikana ny Mint Electronics. Ezaka vokatry ny fanavotana ny CZ Electronics nataon'ny zanak'orinasa Mint Electronics ao amin'ny vondrona Sekoko, orinasa Afrikanina Tatsimo izay miasa eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana sy ny angovo.
Nandritra ny roa taona farany, nampiasa vola efa ho 1 tapitrisa dolara tamin'ny fikarohana sy fampandrosoana amin'ny famoronana orinasan'ny Finday raitra sy tablety ny CZ Electronics. Nanamafy tsara i Sagran Pillay, tale mpanatanteraka ao amin'ny CZ Electronics fa fitaovana teknolojia avo lenta takatry ny fahefa-mividy ireo finday raitra sy tablety ireo. Mba hanitarana ireo mpividy kendrena sy hanatratrarana ny ankamaroan'ny mponina no anton'izany.
Misanda 45 ka hatramin'ny 114 euros ny efijery 7 sy 10 santimetatra!
Mihevitra ilay manam-pahaizana momba ny teknolojia vaovao, Arthur Goldstuck fa hahasarika ireo Afrikanina Tatsimo io finday io, tokony hanana herintsintona toy ny marika iraisampirenena izy. Midika izany fa tokony hitovy endrika ary tokony ahitana fomba fiasa mitovy amin'ny hafa saingy mora vidy.Hoan'i Pillay kosa, fanamby nahomby izany. Ny zavamisy, amin'ny fisiam-bidy anelanelan'ny 45 ka hatramin'ny 115 euros amin'ny efijery anelanelan'ny 7 sy 10 santimetatra, dia tafiditra ao anatin'ny fepetra ahafahana miditra amin'ny tsenan'ny finday izany. Misy anefa ny mbola mampanahy : ny mba tsy iheverana ireo finday vita ao an-toerana ireo ho fakan-tahaka matsatson'ny nohafarana avy any ivelany. Raha izany manko dia midika ho mandamoka izany.
Modely vaovaon'ny finday avo lenta Afrikanina-Tatsimo. Nahazoan-dalana.
Tsy ho tafiditra anatin'ny tsena?
Le plus grand défi des nouvelles marques est de parvenir à entrer dans un réseau. On ne peut pas simplement produire un nouveau téléphone et s’attendre à commencer à le vendre. Si le produit n’est pas porté par un réseau, il n’a aucune chance de s’insérer dans le marché.
Ny fanamby goavan'ireo marika vaovao dia ny hahafahana miditra ao anatin'ny tambajotra. Tsy afaka mamokatra finday vaovao fotsiny na miandry hanomboka hivarotra izany. Raha tsy tohanan'ny tambajotra ny vokatra, dia tsy afaka hiditra ao anatin'ny tsena.
hoy i Goldstuck.
Eny tokoa, tarihin'ny tambajotra ny tsena ankehitriny indrindra ao anatin'ny sehatry ny teknolojia vaovao. Araka izany, tokony hanana tohana sy fahavononana ny vokatra vaovao alohan'ny hidirana ao anatin'ny tsena. Saingy orinasa efa zatra ady sy mitoetra tsara ao amin'ny firenena ny CZ Electronics sy Mint Electronics ka tsy tokony ho olana izany. Izany no hanomezana antoka ireo mpampiasa vola!
Te ho lasa lavitra ny orinasa ka mieritreritra sahady hanao fanitarana any amin'ny firenena Afrikanina hafa sy hivarotra ireo vokatra manerana ny kaontinanta izay mampiasa olona 250 ankehitriny amin'ny famokarana tablety sy finday avo lenta.